skin care for oily skin - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အဆီပွနျသော အသားအရပေိုငျရှငျမြားအတှကျ ထိနျးသိမျးနညျး
အဆီပွနျသော အသားအရပေိုငျရှငျမြားသညျ ပုံမှနျထကျပို အလုပျလုပျသော အဆီဂလငျးကြိတျမြားပိုငျဆိုငျထားသဖွငျ့ အသားရပေျေါ ဖုနျ၊အညဈအကွေးတို့နှငျ့
ပေါငျးစညျးသောအခါ ဝကျခွံ၊ ဆားဝကျခွံ၊ ဝကျခွံပုနျး စသညျ့ အရပွေား ပွသနာမြား ပျေါပေါကျတတျပါသညျ၊ ထိုပွသနာမြားကို လြော့နညျးစရေနျ အောကျပါအရပွေားပုံမှနျထိနျးသိမျး နညျးမြားဖွငျ့ ကာကှယျနိုငျပါသညျ
(၁) မကျြနှာ သဈပါ
အဆီပွနျသူမြားအဖို့ မကျြနှာကို တဈနလြေှ့ငျ ၂ကွိမျမှ ၃ကွိမျခနျ့ သဈသငျ့ပါသညျ. သို့မှသာ မကျြနှာအဆီထုတျလုပျခွငျးကို ထိနျးသိမျးပေးသညျ့အပွငျ ဆဲလျသမြေား ဖယျရှားပေးသဖွငျ့ ဝကျခွံဖွဈပျေါခွငျးတားဆီးနိုငျပါသညျ
မကျြနှာကွေးခြှတျခွငျးကို တဈပတျလြှငျ ၂ ကွိမျ ခနျ့ပွုလုပျသငျ့ပါသညျ၊ အဆီမြားခွငျးနှငျ့ ဆဲလျသမြေားရှိခွငျးက ဆားဝကျခွံ ဖွဈပျေါစပေါသညျ
မကျြနှာကွေးခြှတျ၍ ဆဲလျသေ ဖယျရှားခွငျးက အရပွေားထိနျးသိမျးသော ( Skin Care) မြား၏ အာနိသငျ ပိုမိုထိရောကျစပေါသညျ
မကျြနှာကွေးခြှတျပွီး မကျြနှာပေါငျးတငျခွငျးပွုလုပျပေးပါက ဝငျးပသော အသားအရေ ကိုပိုငျဆိုငျနိုငျမညျဖွဈပါသညျ၊တဈပတျလြှငျ တဈကွိမျခနျ့ ပေါငျးတငျသငျ့ပါသညျ
(၄) ခြှေးပေါကျကညျြးစသေော( ALCOHOL FREE TONER)သုံးပေးပါ
Alcohol free toner ကို နစေ့ဉျသုံးပေးပါက အဆီဂလငျးမြားမှ အဆီထုတျလုပျခွငျး ထိနျးသိမျးပေးနိုငျပါသညျ
(၅) အစို ဓာတျပွနျလညျဖွညျ့တငျးပေးသော (Moisturizer cream) ကို မမပေ့ါနှငျ့
အခြို့က အဆီပွနျသူမြား Moisturizer မသုံးသငျ့ဟုထငျကွပါသညျ၊ အမှနျမှာသငျ့တျောသော Mousturizerကို အသုံးပွုနိုငျပါသညျ
(၆) Sun block( နရေောငျကာ ခရမျ)လိမျးပေးပါ
မယျတငျ (ဆေး ၁)
အဆီပြန်သော အသားအရေပိုင်ရှင်များအတွက် ထိန်းသိမ်းနည်း
အဆီပြန်သော အသားအရေပိုင်ရှင်များသည် ပုံမှန်ထက်ပို အလုပ်လုပ်သော အဆီဂလင်းကျိတ်များပိုင်ဆိုင်ထားသဖြင့် အသားရေပေါ် ဖုန်၊အညစ်အကြေးတို့နှင့်
ပေါင်းစည်းသောအခါ ဝက်ခြံ၊ ဆားဝက်ခြံ၊ ဝက်ခြံပုန်း စသည့် အရေပြား ပြသနာများ ပေါ်ပေါက်တတ်ပါသည်၊ ထိုပြသနာများကို လျော့နည်းစေရန် အောက်ပါအရေပြားပုံမှန်ထိန်းသိမ်း နည်းများဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပါသည်
(၁) မျက်နှာ သစ်ပါ
အဆီပြန်သူများအဖို့ မျက်နှာကို တစ်နေ့လျှင် ၂ကြိမ်မှ ၃ကြိမ်ခန့် သစ်သင့်ပါသည်. သို့မှသာ မျက်နှာအဆီထုတ်လုပ်ခြင်းကို ထိန်းသိမ်းပေးသည့်အပြင် ဆဲလ်သေများ ဖယ်ရှားပေးသဖြင့် ဝက်ခြံဖြစ်ပေါ်ခြင်းတားဆီးနိုင်ပါသည်
မျက်နှာကြေးချွတ်ခြင်းကို တစ်ပတ်လျှင် ၂ ကြိမ် ခန့်ပြုလုပ်သင့်ပါသည်၊ အဆီများခြင်းနှင့် ဆဲလ်သေများရှိခြင်းက ဆားဝက်ခြံ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်
မျက်နှာကြေးချွတ်၍ ဆဲလ်သေ ဖယ်ရှားခြင်းက အရေပြားထိန်းသိမ်းသော ( Skin Care) များ၏ အာနိသင် ပိုမိုထိရောက်စေပါသည်
မျက်နှာကြေးချွတ်ပြီး မျက်နှာပေါင်းတင်ခြင်းပြုလုပ်ပေးပါက ဝင်းပသော အသားအရေ ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်၊တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်ခန့် ပေါင်းတင်သင့်ပါသည်
(၄) ချွေးပေါက်ကျည်းစေသော( ALCOHOL FREE TONER)သုံးပေးပါ
Alcohol free toner ကို နေ့စဉ်သုံးပေးပါက အဆီဂလင်းများမှ အဆီထုတ်လုပ်ခြင်း ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်
(၅) အစို ဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးသော (Moisturizer cream) ကို မမေ့ပါနှင့်
အချို့က အဆီပြန်သူများ Moisturizer မသုံးသင့်ဟုထင်ကြပါသည်၊ အမှန်မှာသင့်တော်သော Mousturizerကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်
(၆) Sun block( နေရောင်ကာ ခရမ်)လိမ်းပေးပါ
မယ်တင် (ဆေး ၁)
Importance of breakfast in children